Samsung Galaxy Tab A na Tab A Plus gosipụtara ya | Gam akporosis
Alexis Martinez | | Mbadamba gam akporo
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ South Korea nwere otu ihe, ọ bụ na ọ bụ ọkachamara na ịmalite ngwaọrụ dị iche iche n'oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ na anyị na-ama na-ahụ na usoro iheomume ya bụ ẹkedori a smartphone kwa afọ, ugbu a ọ ịtụnanya anyị abụọ ọhụrụ smart mbadamba, na Galaxy Tab A na Galaxy Tab A Plus.
Ọ bụ ihe ijuanya na anyị na-ahụ mbadamba nkume ndị a ụbọchị ole na ole mgbe Mobile World Congress afọ a na na kpomkwem afọ a mbadamba n'oge nzuko yiri ka ha efuola na map. Mgbe mbadamba ole na ole ewepụtara n'oge ọgbakọ omebe iwu juru anyị anya, anyị chọpụtara na ahịa maka mbadamba nkume nwere ike ịmalite ịda.
N’ọnwa a anyị nwere ọtụtụ ozi metụtara Samsung, site na kọntaktị mbụ nke Galaxy S6 ọhụrụ na S6 Edge na ihe nwere ike ịbụ smartwatch mbụ okirikiri nke mba Korea. O doro anya na Samsung nwere mmasị ịnọ na mpaghara niile nke ekwentị mkpanaka, site na smartphones site na wearables na iru mbadamba, kpomkwem n'oge a bụ ebe anyị na-ahụ ngwaọrụ ọhụrụ abụọ sonyere ezinụlọ Tab.
N'oge ihe omume na Russia, Samsung ejirila ma kwupụta Tab A na Tab A Plus, ngwaọrụ dị n'etiti nwere nha dị iche iche. Nke mbụ nwere 8 anụ ọhịa ahụ gbasara 9 sentimita asatọ nke Plus mbipute, ọ bụ ezie na ha abụọ ga-enwe mkpebi nke 7 x 1024p. Nke dị egwu, nke mbụ ga-abanye na mpi Google, Nexus 768 na iPad Obere n'ihi na ihuenyo ya agaghị adị 9: 16 dịka anyị na-emebu, kama ga-enwe nha 4: 3.
Nkwupụta nke mbadamba nkume ndị a na-abịa na ozi na-enweghị atụ, ebe ọ bụ na ọ nweghị data banyere ihe nhazi ahụ n'ime, ma ọ bụ ebe nchekwa RAM, nke a kwuworo na ọ nwere ike ịbụ 2 GB. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị maara nchekwa ya dị n'ime ya na batrị nke obere nwanne nwanyị ahụ ga-abụ 16 GB y 4.200 mAh karị. Tab A gbakwunyere nwere ike ịbawanye ike ya n'ihi akụkụ ya ma kwadebe ya na 6.000 mAh. Iji gosipụta atụmatụ ndị ọzọ emere ka ọ bụrụ ọkwa na ọkwa bụ itinye igwefoto abụọ, azụ ga-abụ 5 Megapixels na n'ihu 2 MP.
Tab A ọhụrụ ga-adị na agba abụọ, acha anụnụ anụnụ na ọlaedo, n'okpuru ọnụahịa ga-amalite site 300 dollar dabere na ikike nchekwa na ụdị njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mbadamba gam akporo » Samsung Galaxy Tab A na Tab A Plus gosipụtara ya
Nintendo ga-eme egwuregwu maka ngwaọrụ mkpanaka